Android ဖုန်း အချင်းချင်း ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဘတ်စ်ကားများဘယ်လို စီးရမည်ကို click နှိပ်ရုံဖြင့် ရှာဖွေပေး ,မြေပုံအညွှန်း ပေးပို့နိုင်သော intelligent Bus Searching GOthere Myanmar Multi Directories + Phone Finder အင်တာနက် ရှိရန်မလိုပဲဖုန်းမှတဆင့် မိမိနေရာကို မြေပုံနှင့်တကွ ရှဲလို့ရ ~ ITmanHOME
14:59 phone, နည်းပညာ No comments
Android ဖုန်း အချင်းချင်း ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဘတ်စ်ကားများဘယ်လို စီးရမည်ကို click နှိပ်ရုံဖြင့် ရှာဖွေပေး ,မြေပုံအညွှန်း ပေးပို့နိုင်သော intelligent Bus Searching GOthere Myanmar Multi Directories + Phone Finder အင်တာနက် ရှိရန်မလိုပဲဖုန်းမှတဆင့် မိမိနေရာကို မြေပုံနှင့်တကွ ရှဲလို့ရ
လိပ်စာသိ၊ လမ်းသိသော်လည်း နေရာမသိ မဖြစ်ရလေအောင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပေါင်းများစွာ နှင့် အခြားသော နေရာများကို လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်တို့နှင့်တကွ မြေပုံပေါ်ရှိ တည်နေရာကို ပါ အတိအကျ ပြသပေးနိုင်ပါသည်။ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့ လမ်းများ ကို မြေပုံပေါ်တွင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေ နိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ ဘယ်လိုပဲသွားချင်သွားချင် click နှိပ်ရုံဖြင့် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည့် Intelligent Bus Directory.
်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို အင်တာနက် ရှိရန်မလိုပဲဖုန်းမှတဆင့် မိမိနေရာကို မြေပုံနှင့်တကွ ရှဲလို့ရပြီနော်...
GOThere Myanmar Android Application (Beta-1.0).
android ဖုန်း အချင်းချင်း SMS ဖြင့် မြေပုံအညွှန်း ပေးပို့နိုင်သော ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဘတ်စ်ကားများဘယ်လို စီးရမည်ကို click နှိပ်ရုံဖြင့် ရှာဖွေပေးမည့် intelligent Bus Searching တို့ပါဝင်တဲ့ GOthere Myanmar Multi Directories + Phone Finder ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါပြီ။
android ဖုန်း အချင်းချင်း SMS ဖြင့် မြေပုံအညွှန်း ပေးပို့နိုင်သော ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဘတ်စ်ကားများဘယ်လို စီးရမည်ကို click နှိပ်ရုံဖြင့် ရှာဖွေပေးမည့် intelligent Bus Searching တို့ပါဝင်တဲ့ GOthere Myanmar Multi Directories + Phone Finder ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါပြီ။ Beta Version 1.0.